प्रकाश सपुत भन्छन् : मर्छु जस्तो लागेको थियो तर बाँचे , आँत कमजोर हुने। एन्जाइटीजस्तो ! डरजस्तो ! म त मर्छुजस्तो लाग्ने ! यो कोरोनालाई म सहजै जित्छु भने पनि मानसिक रुपमा यसले कमजोर भने बनाउने रहेछ ! – Classic Khabar
Nextओलीलाई प्रचण्डले फाेन गरेर भने: ‘यो के तमासा गर्नुभएको’ भन्ने प्रश्न गरेपछि ओलीले प्रचण्डलाइ दिए यति नमिठो जवाफ